Tag: Qarax | Sagal Radio Services
Wararkii ugu dambeeyay Qarax lagu weeraray Hotelka Naasahablood 2 iyo rasaas la maqlayo
Sagal Radio Services • News Report • October 28, 2017
Qarax ismiidaamin ah ayaa galabta lagu qaaday Hotelka Naasahablood 2 ee magaalada Muqdisho, iyadoo qarax labaad uu ka dhacay nawaaxiga Hotelka, daqiiqado kaddib qaraxa hore oo ahaa mid aa du xoogganaa oo sababay dhimasho iyo dhaawac.
Xog:Dhimashada Qaraxii Zoobe Oo Mareysa 237 Iyo Dhaawaca 374 Qof
Sagal Radio Services • News Report • October 15, 2017
237)qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen qarax sabtidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, 130 ka mid ah dadkaasi dhintay meydadkooda waa la aqoonsan-waayey. Dadka dhaawaca ah waxaa ay ka badan yihiin 374 qof, waxaa kale 135 la geeyay Isbitaallada magaalada.
Madaxweynaha oo booqday Isbitaalada iyo goobtii qaraxa ka dhacay ee Zoobe (Sawirro)
Madaxweyne Maxamed C/llaahi Farmaajo ayaa goor dhow tagay goobtii uu qaraxii shalay ka dhacay ee Isgoyska Zoobe iyo Isbitaalada la geeyay dadkii ku dhaawacmay.
Faah Faahin: Qarax weyn oo ruxay Muqdisho oo ka dhacay agagaarka Isgoyska Zoobe
Sagal Radio Services • News Report • October 14, 2017
Warar horu dhac ah ayaa ka soo baxaya qarax weyn oo goor dhow ka dhacay nawaaxiga Isgoyska Zoobe ee KM5, halkaasoo ay ku yaallaan goobo ganacsi iyo Hotelo.
Qarax dad badan ku dhinteen oo ka dhacay Suuq ku yaal degmada Wadajir
Sagal Radio Services • News Report • February 19, 2017
Gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa goor dhow ku qarxay suuq ku yaala xaafada Kaawo Godey ee degmada Wada-jir ee magaalada Muqdisho, iyadoo warar kala duwan ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxa.
Faah-faahin Weerarkii Maanta lagu qaaday Hotelka Dayax
Sagal Radio Services • News Report • January 25, 2017
Faah-faahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya Weerarkii Qaraxyada ahaa ee Maanta ka dhacay Hotelka Dayax ee Magaalada Muqdisho.
Qarax khasaare sababay oo ka dhacay goor dhaw oo maanta ah degmada Buurhakaba
Sagal Radio Services • News Report • January 23, 2017
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo ka dhacay suuq lagu iibiyo xoolaha oo ku yaala degmada Buurhakaba ee gobolka Baay.
War deg deg ah’’ Qaraxyo waaweyn oo goor dhaw ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha Muqdisho
Sagal Radio Services • News Report • January 2, 2017
Warar hada na soo gaaraya ayaa sheegaya in labo qarax oo waaweyn goor dhaw ka dhaceen naxaawiga garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho.
Ciidamada dowladda oo qarxiyay miino la dhigay maqaayad ku taala isgoyska Howlwadaag
Sagal Radio Services • News Report • December 26, 2016
Ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa qarxiyay miino la dhigay mid ka mid ah maqaayadaha ku yaala isgoyska Howlwadaag ee magalada Muqdisho.
Faah Faahin Qarixii Xarunta ciidanka Taraafikada iyo Al-Shabaab oo sheegatay (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • May 9, 2016
Faah faahin ayaa ka soo baxaya weerar saaka lagu qaaday xarunta Ciidanka Ilaalada wadooyinka ee Taraafiko, iyadoo weerarkan ay mas’uuliyadiisa sheegatay Kooxda Al-Shabaab.
Lix ruux oo ku geeriyootay qarax ismiidaamin ka dhacay Waqooyiga Gaalkacyo
Sagal Radio Services • News Report • March 31, 2016
Faah faahin ayaa ka soo baxaya qarax ismiidaamin ah geystay dhimasho iyo dhaawac oo saaka ka dhacday waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug.
Qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay Caasimada Turkiga ee Ankara(Sawiro)
Qarax xoogan ayaa daqiiqado ka hor ka dhacay Caasimada Turkiga ee Ankara, iyadoo qaraxa uu ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay.
Wararkii ugu dambeeyay ee qaraxa ka dhacay xeebta Liido
Wararka ka imanaya qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay xeebta Liido ayaa sheegaya in qaraxa kadib koox hubeysan ay gudaha u galeen baararka ku yaal xeebta Liido.
Qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay maqaaxida The Village ee Guriga Hooyooyinka (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • January 2, 2016
Qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa goor dhow ka dhacay afaafka hore ee guriga ururka haweenka gaar ahaan hotel Village.
Kolonyo ciidamo AMISOM ah oo qarax lagula eegtay Ex-Kontarol Balcad
Sagal Radio Services • News Report • November 10, 2015
Kolonyo ciidamo AMISOM ah oo marayay agagaarka warshadii hore ee baastada ayaa qarax lagula eegtay iyadoo qaraxaasina laga maqlay deegaano ka fogfog halka uu ka dhacay.
Qarax dad badan ku dhinteen oo ka dhacay suuq ku yaal waqooyi bari Nigeria
Sagal Radio Services • News Report • August 12, 2015
Illaa 47 ruux ayaa ku geeriyootay, 50-kalena waa ay ku dhaawacmeen, kadib markii qarax xoogan uu ka dhacay suuq aad u mashquul ah oo ku yaala waqooyi bari Gobolka Borno ee dalka Nigeria.
Deg Deg:- Sargaal la sheegay in uu ka tirsan yahay Nabad Sugidda Soomaaliya oo Qarax lagu dhaawacay
Sargaal la sheegay in uu ka tirsan yahay Ciidamada Nabad Sugidda Soomaaliya ayaa lagu dhaawacay Qarax Miino oo loogu xiray Gaari Nooha ah oo uu watay,xili uu marayay Barxada Shaleemo Afrika ee Degmada Xamar Jajab.
Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay Hotel Central
Sagal Radio Services • News Report • February 20, 2015
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qaraxyo ka dhacay Hotelka Central ee degmada Xamar weyne, iyadoo tirada dadka ku dhintay ay ka badan tahay in ka badan 10-ruux.
Ilaa 8-ruux oo ku geeriyooday qaraxyo ka dhacay Hotel Central ee magaalada Muqdisho
Warar horu dhac ah ayaa ka soo baxaya qaraxyo ismiidaamin ahaa oo ka dhacay Hotelka Central ee degmada Xamarweyne iyadoo qaraxyadan ay dhaceen xilli lagu jiray salaadii jimcaha.
Faahfaahn dheeraad ah oo ka soo baxaysa qarax ka dhacay Shalay magaalada Muqdisho (Sawiro)
Sagal Radio Services • News Report • January 5, 2015
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar ismiidaamin ah oo gelinkii dambe ee Shalay ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qarax xoogan oo ka dhacay ka dhacay nawaaxiga Garoonka diyaaradaha Muqdisho (Sawirro)
Sagal Radio Services • News Report • December 3, 2014
Qarax xoogan oo loo maleynayo inuu ahaa mid ismiidaamin ah ayaa goor dhoweyd ka dhacay nawaaxiga Garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho, iyadoo wali aan kala cadeyn qasaaraha ka dhashay.
Shan qof oo ku dhimatay qaraxyo ismiidaamin ah oo Muqdisho ka dhacay caawa
Sagal Radio Services • News Report • January 1, 2014
Ugu yaraan shan qof ayaa ku geeriyooday, 22 qof oo kalena way ku dhaawacmeen qaraxyo caawa fiidkii ka dhacay afaafka hore ee hoteelka Jasiira ee magaalada Muqdisho, waxaan ka hadlay ra’iisul waaaraha Soomaaliya, C/weli Sheekh Axmed Maxamed.
Weearar lagu sheegay Ismiidaamin oo UNDP Muqdihso ka dhacay iyo Al Shabaab oo sheegtay
Sagal Radio Services • News Feature • June 19, 2013
Xarakada Al shabaab oo weerar ismaadaamin ah ku qaaday xarunta UNDP ee Muqdisho iyo qasaaro ka dhashay weerarka.
Qraxyo ka dhacay magaalooyinka Nairobi iyo Mombaasa ee Kenya
Sagal Radio Services • News Report • June 10, 2013
Qaraxyo xoogaan oo dad badan ay ku dhawaacmeen ayaa ka dhacay dalka Kenya iyadoona ay dowlada ku eedeysay taageerayaasha Al-Shabaab
Sagal Radio Services • News Report • May 14, 2013
Seddex qarax oo loo maleynayao inay yihiin miino dhulka lagu aasay, ayaa ka dhacay maanta agagaarka xarunta wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada Muqdisho.
Qarax ismiidaamin ah oo Muqdisho ku dilay in ka badan 10 ruux
Sagal Radio Services • News Report • May 5, 2013
Ugu yaraan 10-qof oo uu ku jiro qofkii qaraxa fuliyay ayaa ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo lala beegsaday gaadiid ay wateen howlwadeenno ka tirsan dowladda Soomaaliya, waxaana gaadiidka la beegsaday ka mid ahaa gaariga wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya.
7 ruux, ayaa ku dhimatay qarax xooggan oo Muqdisho ka dhacay duhurkii maanta
Sagal Radio Services • News Report • March 18, 2013
Ugu yaraan toddobo qof ayaa la rumeysan yahay inay ku dhimatay, in ka badan toban kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax ka dhashay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa oo ku qarxay meel u dhow maqaayad ku taalla magaalada Muqdisho.
Qaraxyo ka dhacay iridka hore ee Masjid ku yaalla Islii xalay oo dhaawacyo sababay
Sagal Radio Services • News Report • December 20, 2012
Seddex ruux, ayaa ku dhaawacantay weerar bambaanooyin loo adeegsaday oo xalay ka dhacay meel dibadda ka ah masjidka Al-amiin ee xaafadda Islii magaalada Nayroobi.
Qarax ka dhacay Maka al-Mukarrama oo dhimasho iyo dhaawac geystay
Sagal Radio Services • News Report • December 14, 2012
Ugu laba qof oo shacab ah ayaa ku dhintay 10- qof oo kalena way ku dhaawacmeen qarax ka dhashay gaari walaxaha qarxa laga soo buuxiyay oo ka dhacay agagaarka isgoyska shaqaalaha ee waddada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho.
Qarax xalay ka dhacay iridka hore ee Masjidka Al-Hiddaaya, Islii Nayroobi, oo ay ku dhinteen 3 ruux kuna dhaawacmeen dad uu ku jiro xildhibaan Yusuf Xasan
Sagal Radio Services • News Report • December 8, 2012
Seddex ruux, ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen tiro kale oo 20 ku dhowna ay ku dhaawacmeen oo uu ku jiro xildhibaanka laga soo doorto degmada Kamakunji ee Islii ay qabta ka tahay Yusuf Xasan Cabdi, ka dib markii uu xalay qarax ka dhacay iridka hore Masjid ku yaalla xaafadda Islii ee magaalada Nayroobi.
Qarax lix ruux ku diley Islii, Nayroobi
News Report • November 18, 2012
Qarrax xooggan oo dilay lix ruux inta la xaqiijiyay ayna ku dhaawacmeen 20 kale, ayaa galinkii dambe ee maanta ka dhacay gaari caasi ahaa (Mini Bus) oo ay la socdeen dad rakaab ah gudaha xaafadda Islii ee magaalada Nayroobi.
Idaacad afka AMISOM ku hadleysa oo Kismayo laga furey, iyo qarax ka dhacay magaalada
Sagal Radio Services • News Feature • October 4, 2012
Ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ee jooga Kismaayo, ayaa maanta howl gallo ka sameeyay magaaladaasi, xilli kolonyo ciidamadaasi ah qarax lagula eegtay gudaha magaalada Kismaayo.